Ugandha oo 2-kun Askar Dheeraad ah u soo diraysa Soomaaliya. | stn radio	Wednesday, November 26th, 2014	Home
Ugandha oo 2-kun Askar Dheeraad ah u soo diraysa Soomaaliya.
Nov 26, 2012 - Aragtiyood	Mid ka mid ah Afhayeenada Ciidamada Milateriga dalka Ugandha oo lagu magacaabo Captain Biyeere ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo dheeraad ah uu u soo diri doono magaalada Muqdisho, si ay u xoojiyaan ciidamada AMISOM, isla markaasna isugu ballaariyaan goobihii ay faarujiyeen Xarakada Alshabaab.
Hadal uu maanta siiyey warbaahinta Caalamka ayaa waxaa uu ku sheegay in 2-kun askari oo dheeraad ah uu ku biirin doonto dowladda Ugandha howl galka nabad ilaalinta ee ka socda Soomaaliya, Ciidamadaasi oo maalmaha soo socda soo gaari doona Magaalada Muqdisho.
“Qorshaheena waa inaan xoojino howl- galka Amisom, waa istiraatiijiyadeena in ciidamo aan ku kordhino howl-galka, si loo wiiqo Xagjiriinta”ayuu yiri Captain Biyeere oo intaa raaciyay inay Ciidamadaas ka howlgali doonaan meelo ka baxsan Muqdisho.
Taliska Ciidamada AMISOM Soomaaliya ku sugan ayaa soo dhoweeyay hadalka ka soo yeeray Dowladda Ugandha ee ah in la soo dirayo Ciidamo Dheeraad ah, waxaana uu sheegay in tallaabadaasi ay sii xoojin doonto qorshahooda ku aadan inay saldhigyo hor leh ka sameystaan gobolada Koonfurta Soomaaliya.